सहुलियत ऋणका लागि विदेशबाट फर्किएकाको सीप परिक्षण कसरी गर्ने ? (अडियो सहित) – Online Jagaran
सहुलियत ऋणका लागि विदेशबाट फर्किएकाको सीप परिक्षण कसरी गर्ने ? (अडियो सहित)
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार ००:५३ November 30, 2018 जागरण
सुर्खेत, १४ मंसिर (जागरण) । सरकारले युवाहरुलाई विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमै लागु गर्नका लागि सहुलियतमा १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले २० वटा सिपको परीक्षण गरेर प्रमाण पत्र लिनका लागि फारम भर्न खुल्ला गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले सुचना सार्वजनिक गरेर सिप परीक्षण गरेर सिप आर्जनको प्रमाण पत्र लिन आनुरोध गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसहित अन्य प्रदेशमा पनि फारम भर्नका लागि सुर्खेत, दैलेख, जुम्लामा फारम संकलन गरेको छ ।
यसै विषयमा हामीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य कार्यालय सुर्खेतकी फारम संकलन फोकल पर्सन चित्रा डाँगीसंग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलाई हामीले सबै भन्दा पहिला कुन कुन सिप परीक्षणका लागि फारम खुलेको छ ? भनेर सोधका छौँ ।
Tagged सहुलियतको १० लाखः
भेरीको फोहर पानी पिउन बाध्य छन् नागरिकहरु
२३ मंसिर २०७६, सोमबार ०६:२३ December 9, 2019 जागरण